Serie A | Mustaqbal Radio
Ancelotti oo lagu wado inuu qabto xulka Italy.
Tababarihii hore ee Koxaha Chelsea, Bayern Munich iyo kuwo kale ayaa hadda la hadalhayaa in uu la wareego talada xulka kubadda Cagta Italy kaddib heshiis horudhac ah oo ay isla gaareen maamulka Xulka Italy. Tababaraha Reer Talyaani ayaa la sheegayaa in hal tallaabo oo kaliya uu u jiro sidii uu u noqon lahaa beddelka tababarihii hore ee rasmiga ahaa Giampiero ...
Napoli oo dhulka ku jiiday Juventus.
Kooxda kubadda cagta SSC Napoli ayaa guul weeyn oo muhiim u ah ka gaartay dhigeeda Juventus kulan aad u adkaa oo labada kooxood ku dhex maray garoonka Allianz Stadium. Labadaan koox ayaa ah labada naadi ee ku hardamaya sanadkaan hanashada Horyalka Talyaaniga, waxaana u dhaxeeyay kaliya 4-dhibcood ka hor inta uusan kulanka bilaaban. Napoli ayaa 1-0 ku garaacday kooxda Juventus, ...
Kooxaha ku dagaallamaya horyaalka Serie A-da Italy ayaa caawa goradda iskula jira ciyaar xiiso badan oo ka dhici doonta Magaalada Torin ee ay ka dhisantahay Juventus. Labada Koox ayaa aad isugu biratumanaya iyada oo uu jiro baaq la xiriira in aysan taageerayaasha sameyn wax rabashado ah. Xiddigaha sida gaarka ah isha loogu hayo waxaa ka mid ah Douglas Costa oo ...
AC Milan oo ku raad joogta xidig muhiim u ah Juventus.
Kooxaha AC Milan iyo koox ka dhisan horyaalka China Super League ayaa lagu soo waramayaa inay doonayaan weeraryahanka kooxda Juventus Mario Mandzukic. Mandzukic ayaa kujira xili ciyaareed cajiib ah 31 jirkaan ayaa dhaliyay 10 gool xilli ciyaareedkan. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Croatia ayaa labo sanno ka harsan qandaraaskiisa, laakiin sida ay qoreyso Calciomercato, Milan ayaa laga yaabaa inay isku ...
Boca Juniors oo diirada u saaran saxiixa goolhaye da,ah.
Goolhayaha Juventus Gianluigi Buffon ayaa lagu soo waramayaa inuu diirada u saaran yahay kooxda Boca Juniors. Buffon – waa 40 jir da ‘ah – waxa uu ku soo gabagabeynayaa dhamaadka halyeeyga kooxda Serie A isagoona saftay 651 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Radio Continental, Boca ayaa dooneysa ...